merolagani - एउटा सानाे रेस्टुराँदेखि विश्वकाे सबैभन्दा ठूलाे फास्ट फुड फ्रान्चाइजसम्म, म्याकडोनाल्डकाे यात्रा
एउटा सानाे रेस्टुराँदेखि विश्वकाे सबैभन्दा ठूलाे फास्ट फुड फ्रान्चाइजसम्म, म्याकडोनाल्डकाे यात्रा
Jun 22, 2022 07:03 PM Merolagani
परिवर्तनशील समयको बदलिँदो स्वादसँगै म्याकडोनाल्डको मेनु पनि परिवर्तन भएको छ। १९४० मा, क्यालिफोर्नियाको सान बर्नार्डिनोमा एउटा सानो रेस्टुराँबाट शुरु भएको म्याकडोनाल्ड अहिले विश्वभर फैलिएको छ।
सन् १९४०मा मोरिक (म्याक) र रिचर्ड (डिक) म्याकडोनाल्ड नामका दुई दाजुभाइले यसको सुरुवात गरेका थिए। यसपछि उनले रे क्रकको समर्थन पाए । रे क्रक उही व्यक्ति हुन्, जसको सहयोगमा म्याकडोनाल्ड विश्व प्रसिद्ध फूड चेनको रूपमा स्थापित भएको थियो। बर्गरका लागि प्रसिद्ध म्याकडोनाल्ड आज विश्वभर फैलिएको छ। यद्यपि, अब म्याकडोनाल्ड्सको मेनुमा बर्गर मात्र भने छैन।
क्यालिफोर्नियाबाट शुरु भएको थियो कथा
यो यात्रा क्यालिफोर्नियाको एउटा सानो रेस्टुराँबाट शुरु भएको थियो, जसलाई रिचर्ड र मोरिस म्याकडोनाल्ड नामका दुई दाजुभाइले सुरु गरेका थिए। तर यस कम्पनीको सफलताको सम्पूर्ण श्रेय सन् १९५५ मा यस कम्पनीमा आवद्ध भएका रे क्रकलाई जान्छ। क्रक यसमा आबद्ध भएपछि, उनले कम्पनीलाई उचाइमा पुर्याए। यस सफलताको कथा पछाडिको व्यक्ति रे क्रकको कथा पनि रोचक छ।
को हुन् रे क्रक?
रे क्रकको जन्म ५ अक्टोबर १९०२ मा ओक पार्क, इलिनोइस, संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको थियो। रे क्रकको बाल्यकाल पनि संघर्षमै बित्यो। बुबाको आम्दानी खास थिएन। दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा, केवल १५ वर्षका थिए। त्यो बेला उनी एम्बुलेन्स चालक बने, ताकि उनले घरको खर्चमा योगदान गर्न सकून्। उनको जीवनमा धेरै उतारचढाव आए तर उनले कहिल्यै हिम्मत हारेनन्। पैसा कमाउन सक्ने हरेक काम गरे।
कागज बेचे, डीजे पनि बने
रे क्रकले आफ्नो जीवनमा धेरै कामहरू गरे। उनले कागज बेचे, उनी पनि डीजे बने। यति मात्र होइन, उनले रेस्टुराँमा सरसफाईको काम पनि गरेका छन्। उनीहरूले विभिन्न प्रकारका कामहरू गरे किनभने तिनीहरूले व्यापार जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन्। यी सबै गरेपछि उनी मिल्कसेक मिक्सर बेच्ने सेल्सम्यान बने। उनले १७ वर्ष सेल्सम्यानको काम गरे। उनी विभिन्न होटल र रेस्टुराँमा मिल्कशेक मिक्सर बेच्ने गर्थे।
म्याकडोनाल्ड्स देखेर अचम्मित भए
रे सन् १९५४ मा क्यालिफोर्नियाको सान बर्नार्डिनोमा एउटा रेस्टुराँमा सेल्सम्यानको रूपमा पुगेका थिए। यहाँका मालिकहरूले उनीहरूबाट धेरै मिल्कसेक मिक्सरहरू किने। यस समयमा उनको नजर म्याकडोनाल्ड्स रेस्टुराँमा पर्यो, जुन दुई भाइ डिक र म्याक म्याकडोनाल्डले चलाएका थिए। रेस्टुराँमा ग्राहकको लाइन देखेर उनी छक्क परे। किनभने, उनले सेल्सम्यानको काम गरेको अवधिभर कुनै पनि रेस्टुराँमा यस्तो भीड देखेका थिएनन्। उनले यो रेस्टुराँमा लाइनमा बसेर मानिसहरु ह्यामबर्गर, फ्रेन्च फ्राइज खाइरहेका देखे। रे क्रकले तिनीहरूमध्ये केहीलाई यहाँ के विशेष छ? भनेर सोधे, तिनीहरूले जवाफ दिए कि यहाँ उत्तम ह्याम्बर्गर मात्र १५ सेन्टमा उपलब्ध छ र अर्डर डेलिभरीका लागि वेटरहरूलाई गर्न बारम्बार बोलाइरहनु पर्दैन।
रे क्रक म्याकडोनाल्डमा संलग्न
म्याकडोनाल्ड ब्रदर्सलाई रेस्टुराँको लागि नयाँ एजेन्टको आवश्यकता थियो, र रे क्रकले मौका नगुमाइ त्यसमा संलग्न हुने निर्णय गरे। सो समयमा रे ५२ वर्षका थिए। उसलाई ह्याम्बर्गरको स्वाद थाहा थियो र छोटो समयमा बुझ्यो कि यो मानिसहरू माझ धेरै लोकप्रिय छ। उनले सोचे कि किन यसको फ्रान्चाइज नलिने? यसका लागि उनले दुवै दाजुभाइलाई प्रस्ताव राखे। दुवै दाजुभाइले १४ वर्षदेखि यो रेस्टुराँ सञ्चालन गर्दै आएकाले उनीहरू सफल र खुसी भएकाले प्रस्ताव स्वीकार गरेनन्। तर, रे क्रकको सोचले अर्कै थियो।
फ्रान्चाइजको अधिकारको लागि
अन्तमा, उनले दुवै दाजुभाइसँग सम्झौता गरे र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फ्रान्चाइजको अधिकार लिए। अब जब उनीसँग सबै अधिकारहरू थिए, उसले यसलाई पुनः नामाकरण गर्न पनि सक्थे, तर उनले पाए कि म्याकडोनाल्ड रे क्रक भन्दा राम्रो छ। त्यसैले उनले नयाँ नाम परिवर्तन गरेनन्। यहीँबाट उनको भाग्यको तारा फेरियो।
१९५५मा पहिलो फ्रान्चाइज रेस्टुराँ
अप्रिल १९५५ मा, पहिलो फ्रान्चाइज्ड रेस्टुराँ डेस प्लेन्स (इलिना‘य) मा खोलियो। रे क्रकले स्वादयुक्त ह्याम्बर्गर मात्र प्रदान गरेनन् तर यसको सजावटको पनि पूर्ण ख्याल राखे। स्वादसँगै यसको सजावट देखेर मानिसहरु पनि आकर्षित हुने उनलाई थाहा थियो। त्यो सेल्फ सर्भिस रेस्टुराँ थियो। पहिलो दिन २१ हजारभन्दा बढीको बिक्री भएको थियो। नयाँ रेस्टुराँले पहिलो दिनमै यति धेरै कमाउन पाउनु कुनै आश्चर्यभन्दा कम थिएन। डिक एन्ड म्याकबाट इक्विटी खरिद गरेपछि, उनी विश्वको पहिलो फास्ट फूड रेस्टुराँको मालिक बने।
१८ करोडमा खरिद गरिएको थियो म्याकडोनाल्ड
रेको फ्रान्चाइजी रेस्टुराँहरू सफलताको लागि द्रुत रूपमा बढ्दै गए। १९५८ सम्म, म्याकडोनाल्ड्सले १०० मिलियन ह्याम्बर्गरहरू बेच्ने रेकर्ड बनाएको थियो। दुई भाइहरूले रेसँग कुरा गरे र म्याकडोनाल्ड्स किन्न प्रस्ताव गरे। रेले त्यतिबेला दुवै दाजुभाइलाई १८ करोड तिरेर म्याकडोनाल्ड्स किनेका थिए।
१० वर्षमा ७ सय रेस्टुराँ खुले
रेले १० वर्षमा १०० म्याकडोनाल्ड्स रेस्टुराँहरू खोले। म्याकडोनाल्डको ह्याम्बर्गर विश्वविद्यालय १९६१ मा सुरु भएको थियो, जहाँ यसलाई विभिन्न व्यञ्जनहरू तयार गर्न सिकाइन्थ्यो। जसमा विद्यार्थीहरुलाई स्नातक र स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान गरिएको थियो। यो आफ्नो प्रकारको एक अद्वितीय विश्वविद्यालय थियो। सन् १९६२ मा पहिलो पटक म्याकडोनाल्डको रेस्टुराँभित्र कुर्सी राखिएको थियो र ग्राहकलाई बसेर खाना खाने सुविधा दिइएको थियो। म्याकडोनाल्ड सन् १९६४ मा शेयर बजारमा प्रवेश गरेको थियो। यसको पहिलो शेयर २२.५० डलरमा बिक्री भएको थियो, जुन यसको आधारभूत दर भन्दा १२.५० डलर बढी थियो।
म्याकडोनाल्ड सन् १९९६ मा भारत पुग्यो
चार वर्ष भित्र नै १०० औं म्याकडोनाल्ड्स शिकागोमा खोलियो। अमेरिका बाहिर पहिलो म्याकडोनाल्ड्स सन् १९६५ मा क्यानडामा खोलिएको थियो। सोही वर्ष, रे क्रकले म्याकडोनाल्डलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाएका थिए, जुन आज धेरै देशको स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत छ। म्याकडोनाल्ड्स यति छिटो बढ्यो कि १९९४ सम्म, विश्वका ७९ देशहरुमा १५ हजार म्याकडोनाल्ड्स रेस्टुराँहरू खोलिएका थिए। १९९६ मा, भारत विश्वको ९५ औं देश थियो जहाँ म्याकडोनाल्ड पुगेको थियो।
३१ हजारभन्दा बढी रेस्टुराँ
आज, काउन्टर सेवा, पैदल र ड्राइभ–थ्रु सेवाको इनडोर र आउटडोर सीटिंगका साथ विश्वका १२२ देशहरूमा ३१ हजार भन्दा बढी म्याकडोनाल्ड रेस्टुराँहरू छन्, जसको वार्षिक बिक्री २३ बिलियन डलरभन्दा बढी छ। १९८४ मा, रे क्रक संसारबाट बिदा भए। ८४ वर्षको उमेरमा उनी ५२ वर्ष सेल्सम्यान थिए र बाँकी ३० वर्ष उनी विश्वको सबैभन्दा ठूलो रेस्टुराँन्ट चेनका मालिक भएर बाँचे। आज पनि म्याकडोनाल्ड विश्वको सबैभन्दा ठूलो रेस्टुराँ चेन हो।
रे क्रकको चलचित्र
फास्टफुड रेस्टुराँ म्याकडोनाल्डका संस्थापक रे क्रकको जीवनमा आधारित फिल्म ‘द फाउन्डर’ २०१७ मा रिलिज भएको थियो। जोन ली ह्यान्ककद्वारा निर्देशित र रोबर्ट सिगेलद्वारा लिखित फिल्ममा क्रकको रूपमा माइकल किटनले अभिनय गरेका थिए। ‘द फाउन्डर’ मा क्रकको वास्तविक जीवन देखाइएको छ। किटनले एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘यो फिल्मभन्दा पहिले मलाई क्रक नामको व्यक्ति थियो भन्ने मात्र थाहा थियो, तर अब कसैले मलाई सोध्यो भने म भन्न सक्छु कि म्याकडोनाल्ड्स सुरु गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। यसबारे ९० प्रतिशत जनतालाई थाहा छैन।’